काठमाडौ । नेपाली नाम नै उज्यालो ज्योति हो । ज्योति नचम्किएको कहाँ पो छ र । विश्वका अनेकौँ कुनामा पुगेर नेपाल र नेपालीको नाम चम्काउने, देशको शीर उचो राख्ने तमाम सफल नेपालीलाई सल्यूट । आज फेरी अर्का दुई नेपाली छोरा छोरीले नेपाली आमाको मुहारमा खुशी भरेका छन् । उनीहरु सर्वोत्कष्टको अवार्ड थाप्दै गर्दा नेपाल आमा कति मुस्कुराउने हुन् कल्पना भन्दा माथी नै हुन्छ । यही खुशीको खबर आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौ ।
नेपाली दुई जना वैज्ञानिक ईन्जिनियर अमेरिकामा उच्च वैज्ञानिक पुरस्कारले सम्मानित भएका छन् । सम्मानित हुनेमा नाशामा कार्यरत जनकपुरकी वैज्ञानिक ईन्जिनियर डा. रश्मी साह नासाद्धारा अर्लि करिअर पब्लिक अचिभमेन्ट पुरस्कार २०१९ बाट सम्मानित हुनुभएको छ ।
यस्तै अमेरिकाको ईन्टेल कम्पनीमा कार्यरत जनकपुका वरिष्ठ अनुसन्धान कर्ता वैज्ञानिक ईन्जिनियर डा. सतिशचन्द्र झा ईनटेल कम्पनीको सर्वोच्च अविष्कारक पुरस्कार २०१९ बाट सम्मानित हुनुभएको हो । यो पुरस्कार नँया नँया खोज अनुसन्धान कर्तालाई दिदै आएको छ । यी दुबै वैज्ञानिकको धनुषाका हुन ।
वैज्ञानिक ईन्जिनियर डा. रश्मी साह
वैज्ञानिक ईन्जिनियर डा. सतिशचन्द्र झा
बाल्टिमोरमा अरा’जक अ’स्वेत व्यक्तिको गो’ली’बाट प्र’तिभावान बिधार्थी सागर घिमिरेको नि’धन